TCDD waxay la tartami doontaa waaxda khaaska ah ee wadooyinka tareenka Tan iyo 2021 | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraTCDD waxay la tartami doontaa waaxda khaaska ah ee tareenka ilaa iyo 2021
18 / 01 / 2020 06 Ankara, Gobolka Central Anatolia, tareenka, GUUD, Headline, TURKEY
Laga bilaabo tcdd, waxay la tartami doontaa waaxda gaarka loo leeyahay wadooyinka
Barta ayaa lagu riixay si ay u furato khadadka tareenka shirkadaha gaarka loo leeyahay iyadoo TCDD ay la tartami doonto waaxda khaaska ah xarkaha laga bilaabo 2021.
SözcüSida ku xusan warbixinta Ergeyga Süzer; Gaadiidka xamuulka qaada ee wadada tareenka kadib, rakaabka rakaabka ayaa sidoo kale loo furay shirkadaha waaxaha gaarka loo leeyahay. Sida ku xusan sharciga qabyada ah ee cusub, illaa 2021, marka laga soo tago TCDD, tareenka shirkadaha gaarka loo leeyahay ayaa bilaabi doona inay rakaab ku qaadaan xayndaabka ay dowladdu leedahay. Haddii shirkadaha tareemada gaarka loo leeyahay, ee kiraysan doona khadadka tareenka ee jira 10 sano, ay oggolaadaan inay ka shaqeeyaan khadadka waxyeellada u geysta, waxa khasaare u gelaya dowladda. Haddii qaanuunka cusubi noqdo nolosha, shirkadaha tareenka gaarka loo leeyahay, sida shirkadaha basaska ee ku-meelgaarka ah, ayaa ku adeegi doona waddooyinka tareenka. Saraakiisha Ururka Tareenada ee abaabulan ee TCDD ayaa sheegay inaysan dooneynin in la furo gaadiidka tareenka waaxda gaarka loo leeyahay, iyagoo ka walwalsan inay wadada u xaareyso qandaraas hoosaad.
Turkey saaray in 2013 by Law ku Xorreynta ee Railway gaadiidka ee gobolka halkaas oo TCDD kaliya isticmaali xamuulka tareenka iyo rakaabka ayaa si rasmi ah u furay in ganacsiga gaarka loo leeyahay. Iyadoo sharciga la daabacay 7 sano ka hor, TCDD waxaa loo qeybiyay kaabayaasha iyo gaadiidka, halka shabakadda guud ee kaabayaasha dhaqaalaha ee waddanka oo dhan loo daayay TCDD, halka TCDD Taşımacılık A.Ş. loosoo wakiishay inuu guto waajibaadka adeegga bulshada ee saaran rakaabka illaa dhamaadka 2020. Waajibaadkaan, oo sidoo kale saadaalinaya TCDD Taşımacılık A.Ş. inay dowladdu dabooleyso, wuxuu dhamaan doonaa 31ka Diseembar 2020. Sidaa darteed, laga bilaabo 2021, waajibaadka adeegga dadweynaha waxaa lagu fulin doonaa labada TCDD Tasimacilik iyo waaxda gaarka loo leeyahay. Bixinta waajibaadka luminta waxaa sidoo kale loo samayn doonaa shirkaddaas haddii adeegga laga soo qaado.
Agaasinka Guud ee Xeerka Tareenka ee Wasaaradda Gaadiidka ayaa dadweynaha u furay websaydhka rasmiga ah si looga wada hadlo qabyo-qoraalka sharciga fulinta, maadaama waajibka TCDD uu dhacayo sanadkan. Sida ku cad qabyo-qoraalka cinwaankiisu yahay "Shuruucda Xulashada Waajibaadka Adeegyada Dadweynaha ee Gaadiidka Rakaabka iyo Xeerarka, Hirgelinta iyo Nidaamyada Maareynta iyo Mabaadi'da Qandaraasyada Adeegga Dadweynaha", waddooyinka tareenka iyo kaabayaasha wadooyinka tareenka hoos tagaya ee TCDD waxaa sidoo kale loo furi doonaa shirkadaha waaxda gaarka loo leeyahay. Gaadiidka xamuulka ah oo aan ka aheyn rakaabka ayaa weli waxaa fuliya TCDD ilaa 3-4 shirkadood.
Haddii qawaaniinta qabyada ah la dhaqan geliyo, dhammaan Khadadka tareenka ee dalka oo dhan waxaa loo furi doonaa shirkado gaar loo leeyahay iyadoo lagu bixinaayo qandaraas heer gobol iyo heer qaran. Shirkadaha doonaya inay sameeyaan gaadiidka tareenka waxay awood u yeelan doonaan inay dalbadaan shaqsi ahaan ama wadajirka dhammaan khadadka heer gobol ama heer qaran. Qandaraasyada waxaa lagu sameyn doonaa iyadoo lagu saleynayo xawaare sare, xawaare sare, xariiq weyn iyo gaadiidka rakaabka ee goonida ah shaqsi ahaan ama wadar ahaan.
Tirada Shaqaalaha TCDD
shaqaalaha TCDD Xiriirrada
sarkaal 624 363
heshiis 7.916 5.886
Shaqaalaha joogtada ah 5.162 6.537
Shaqaale ku meelgaar ah 251 1
total 13.953 12.787
Xusuusin: waxaa laga soo qaatay warbixinta SAI
Dadweynaha ayaa qarin doona khasaaraha
Sida ku xusan qabyada qoraalka la diyaariyey, haddii qaybta gaarka loo leeyahay ay rabto kaliya tareeno xawaare sare leh, waxay ku shaqeyn doontaa tareenada xawaare caadi ah oo ay weheliso tareenadan. Khasaaraha ka soo gaadha shirkadaha gaarka loo leeyahay, ee aan faa iido doon ahayn laakiin waa inay gorgortamaan khadadka ay tahay in loogu adeego adeegga dadweynaha, waa la daboolayaa waxaana la bixin doonaa 'macaash macquul ah'. Qeybta gaarka loo leeyahay ayaa awoodi doonta inay iibsadaan jadwal tareen oo qaada rakaabka ka yimaada dalka gudihiisa ama dibadiisa, ama ay kireysan karaan gaari hadii uu doonayo.
Iskudhafka xagasha waa la kululeeyaa
UTİKAD waxay la kulantay qaybta shirarka dhaqaalaha iyo saadka
UTIKAD waxay la kulmeysaa Suuqa ee Logitrans
Farsamayaqaannada 'YHT' waxaa lagu tababari doonaa qalabka mashiinka laga bilaabo 2017
Tartanka gaarka ah ee tareenka
Wasiirka Arimaha Gudaha, Waaxda Tareenka 1 Bisha Janaayo
Mashruuca gaadiidka ee US $ 17 oo ah in lagu dhammeeyo 2021
Üsküdar-Beykoz Metro oo u furan 2021
Imtixaanka Imtixaanka 2021 ee Gaadiidka Xawaaraha Sare ee Bursa
Sheegasho ka timaadda BTS una wareejisaa tikitka TCDD Tikidhada loo gudbiyo qeybta gaarka ah
ZILE, TURHAL, HACIBAYRAM, BASIN IYO GELENEN STATION AREAS oo leh mashruucyo LED ah…
Boostada Shaqada: TÜVASAŞ Ogeysiiska Qaadista Wax Iibsiga ee Dagaalka Argagixisada
Isku dayga Tigreega ee Switzerland lama la xiriiro Argagixisada
Beeraleyga wadada weyn ee leh cagaf
Tareenada gaarka ah
shirkad gaar loo tababarayo
shirkadaha tareenka gaarka loo leeyahay
Agaasimaha Guud ee Xeer-maamuleedka Tareenka
gaadiidka rakaabka ee tareenka
TCDD ma takhasus ayey leedahay?
tareenada xawaaraha sare